Marxuum Cali Khaliif Galeyr oo maanta lagu wado in lagu aaso Muqdisho | Dhacdo
Marxuum Cali Khaliif Galeyr oo maanta lagu wado in lagu aaso Muqdisho
Wararka ka imaanaya Magaalada Jigjiga ee Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya in maanta lagu wado in magaaladaasi laga qaado meydka marxuum Cali Khaliif Galeyr, Ra’iisal Wasaarihii hore ee Somaliya.
Marxuumka ayaa Khamiistii ku geeriyooday Magaalada Jigjiga. Masuuliyiinta Dowlad Deegaanka ayaa sheegay in marxuumka uu u geeriyooday xanuunka COVID-19.
Diyaarad sida meydka marxuum Cali Khaliif Galeyr ayaa saacadaha soo socda lagu wadaa inay ka dejiso Magaalada Muqdisho, halkaasoo lagula tukan doono Salaadda Janaasada, laguna aasi doono.
Wasiir Bidhaan oo la hadlay Laanta afka Somaliga ee BBC ayaa xusay in Madaxda Qaranka iyo masuuliyiin kalaba ay ka qaybgeli doonaan Salaadda Janaasada.
Allaha u naxariistee Cali Khaliif Galeyr ayaa noqonaya Ra’iisal Wasaarihii 2aad ee Soomaaliyeed oo xanuunka COVID-19 u geeriyooda. Ra’iisal Wasaare Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde) ayaa xanuunkaasi 1-dii bishii April ee sanadkan ugu geeriyooday Magaalada London ee dalka Ingiriiska.
Galeyr ayaa sidoo kale noqonaya Ra’iisul Wasaarihii 3aad oo sanadkan ka baxa umadda Soomaaliyeed. 12-kii bishii Luulyo ayay ahayd markii Ra’iisal Wasaare Xasan Abshir Faarax uu ku geeriyooday Magaalada Ankara ee dalka Turkiga.